नायिका मनिषा कोइरालाको पक्षमा नेपालका चर्चित कलाकारहरू उभिए - नेपालबहस
गृहपृष्ठ कला/साहित्य नायिका मनिषा कोइरालाको पक्षमा नेपालका चर्चित कलाकारहरू उभिए
८ जेठ, काठमाडौं । नेपालका चर्चीत कलाकारहरू नायिका मनिषा कोइरालाको पक्षमा उभिएका छन् । नेपालले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको नक्सा जारी गरेपछि नायिका कोइरालाले सो निर्णयको समर्थन गरेकी थिइन् ।
सोही विषयलाई लिएर भारतीय मिडिया कोइरालाविरूद्द खनिँदा नेपालका कलाकार भने मनिषाको पक्षमा उभिएका हुन् । वरिष्ठ कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ, हरिवंश आचार्यसहित कलाकार दिपाश्री निरौला र जितु नेपालले मनिषाको समर्थन गरेका छन् । रेडियो काठमाडौं ९२.१ मेघाहर्जमा यु.पी लामिछानेसँगको संवादमा कोइरालाको पक्षमा धारणा राखे ।
अर्का वरिष्ठ कलाकार हरिवंश आचार्यले भारतको मिडिया गाली गर्न र कराउनका लागि संसारकै उदाहरण भएको बताए । ञञमनिषा कोइरालाले देशको पक्षमा जे बोल्नुभएको छ । उहाँलाई धन्यवाद दिनुपर्छ । उहाँले मोह र डर त्यागेर जुन साहस गर्नुभयो । सबै नेपालीले धन्यवाद उहाँलाई धन्यवाद दिनुपर्छझझ, उनले भने ।
त्यस्तै, अभिनेत्री दिपाश्री निरौलाले नायिका कोइरालाले बोलेर राम्रो काम गरेको भन्दै उनले सराहनीय भएको बताइन् । उनले कांग्रेस नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले पनि राष्ट्रवादी अडान राखेको भन्दै उनले प्रशंसा गरिन् । अर्का कलाकार जितु नेपालले भारतीय मिडिया देख्दा दया लागेर आएको बताए । नायिका कोइरालको पक्षमा आफुहरू रहेको पनि उनले बताए ।
अघिल्लो लेखनेपालमा कोरोना संक्रमित ४ सय ५७ पुगे
अर्को लेखदार्चुलाको घाँटीबगरमा सेना तैनाथ
प्रधानमन्त्री ओलीले भने, नक्शा छापेका कारण सरकार परिवर्तन हुन्छ ?
परराष्ट्र भन्योले, नेपालको चीनसँग कुनै सीमा विवाद छैन !
कालापानी र लिम्पियाधुरा भोगचलनका आधारमा भारतको हुनै सक्दैन : नेता अधिकारी
कालापानीबाट सैनिक फर्काउन भारतसँग नेकपा नेता शर्माकाे माग
नेकपा प्रवक्ता श्रेष्ठ भन्छन्, भारतको हेपाहा प्रवृत्ति सह्य हुँदैन
प्रधानसेनापति थापा र सशस्त्र प्रहरीका आईजीपी खनाल दार्चुलाकाे सीमा क्षेत्र प्रस्थान
कांग्रेसले भन्यो, नक्सा पारित भएकोमा बधाई ! अब भूमि फिर्ता लिनुपर्छ
नयाँ नक्सा र छाप अनुमोदन भएपछि देशभर दीपावली